Gambia ‘oo maxkamadeyn doonta’ madaxweynihii hore Yahya Jammeh | Onkod Radio
Gambia ‘oo maxkamadeyn doonta’ madaxweynihii hore Yahya Jammeh
BANJUL (Onkod Radio )— Dowladda Gambia, ayaa Arbacadii sheegtay inay aqbashay talo uu soo jeediyay guddiga runta iyo dib u heshiisiinta, taas oo aheyd in madaxweynihii hore Yahya Jammeh oo hadda dibad-joog ah lagu maxkamadeeyo dilal iyo dembiyo kale oo looga shakisan yahay tan intii uu xaafiiska joogay.
Isagoo sharraxayay jawaabta rasmiga ah ee dowladdu ka bixisay warbixinta TRRC, ayaa Xeer Ilaaliye Jallow wuxuu sheegay in fulinta talooyinkeeda ay tahay inay ka mid boqon doonaan “waqti cad iyo natiijooyin la taaban karo.”
“Waxaa hubaal ah in aan dhihi karo waa in madaxweynihii hore Jammeh uu wajihi doono caddaalad,” ayuu yiiri Jallow.
Si uu Jammeh u wajaho maxkamadeynta, Equatorial Guinea waa inay oggolaato inay Jammeh u gacan geliso dalka Gambia. Sidoo kale saddex meelood labo meel baarlamaanka Gambia ayaa ku qasbanaan doona inay ansixiyaan dacwad oogistan.